သုညသောင်းကျန်းမှုသဲမုန်တိုင်း Hack ats Cheats၊ Aimbot, ESP, Wallhack - Gamepron
သုည သောင်းကျန်းမှု: သဲမုန်တိုင်း Hack
သင်၏ Zero Insurgency: Sandstorm Hack နှင့်သင်၏အတွင်းနတ်ကိုထုတ်ပစ်ပါ
ကျွန်ုပ်တို့၏သောင်းကျန်းမှု - သဲမုန်တိုင်းလှည့်စားခြင်းကိုမည်မျှကြာကြာသင်ရယူနိုင်သည်ကိုသင်ထိန်းချုပ်နိုင်သည် - ယနေ့ ၁ ရက်ကုန်ပစ္စည်းသော့ကိုဝယ်ယူပါ။
တခါတလေသင်ဟာတစ်ရက်သာတန်သော hacks များနှင့်ကျေနပ်ရောင့်ရဲမည်မဟုတ်! ယနေ့တစ်ပတ်ကုန်ပစ္စည်းသော့ကို ၀ ယ်ပါ။
GamePron မိသားစု၏တရားဝင်အသိအမှတ်ပြုအဖွဲ့ဝင်တစ် ဦး ဖြစ်လာပါ။ ၁ လကုန်ပစ္စည်းသော့ကိုယနေ့ဝယ်ပါ။
သောင်းကျန်းမှု - သဲမုန်တိုင်းတစ်ခုသည်အချို့သောအာရုံစိုက်မှုကိုအာမခံပေးသောဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်ထိုအရာမရှိလျှင်သင်အောင်မြင်မှုများစွာမရနိုင်ပါ။ ကျေးဇူးတင်စရာကောင်းတာကမင်းတို့ရဲ့တိုက်ပွဲတွေအားလုံးမှာအနိုင်ရဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Insurgency: Sandstorm Zero Hack ကိုသုံးနိုင်တယ်။
သောင်းကျန်းမှု: Sandstorm သုည Hack ပြန်ကြားရေး
လက်တွေ့ကျသောစစ်ဘက်မှသေနတ်သမားများသည်လူအများစုအတွက်အမြဲတမ်းနှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းမည်မဟုတ်ပါ။ သို့သော် Insurgency: Sandstorm သည်သင်၏စွမ်းရည်ကိုပျမ်းမျှသေနတ်သမားထက်များစွာပိုသောစမ်းသပ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ စစ်ပွဲအတွင်းမည်သည့်လက်နက်များရောက်ရှိလာမည်နှင့်သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ၏ကျွမ်းကျင်မှုအဆင့်ကိုသင်စိုးရိမ်ရမည်။ အကယ်၍ သင်သည်ခဏတာကစားနေသောကျွမ်းကျင်သောကစားသမားများနှင့်ဆန့်ကျင်နေလျှင်ကျွန်ုပ်တို့၏ Insurgency: Sandstorm Zero Hack ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်တစ်ခုတည်းသောအလားအလာရှိသောအဖြေဖြစ်နိုင်သည်။ အထူးသဖြင့်ဒီဂိမ်းနဲ့ပတ်သက်လာရင်၊ ကောင်းသောအရာအားလုံးကတဆင့်သင်၏လမ်း cheat နိုင်ပါတယ်!
Visuals အတွက်ကတော့ရန်သူတွေကို ESP နှင့် Info (အဝေးမှရန်သူများကိုအဝေးမှကြည့်ရှုရန်ခွင့်ပြု) ပေးတယ်။ သင်ကြည့်ရှုနိုင်သောစစ်ဆေးမှုများ၊ ချိန်ညှိ / ချောမွေ့စေခြင်းနှင့်အရိုးရွေးချယ်ခြင်းများပါသည့် Aimbot ကိုလည်းအသုံးပြုနိုင်သည်။ Recoil နှင့် Sway ကိုဖယ်ရှားခြင်းသည်ဤကိရိယာဖြင့်လည်းဖြစ်နိုင်သည်။
ရန်သူ ESP (သေတ္တာများ၊ လိုင်းများ၊ အရိုးစု)
ရန်သူအချက်အလက် (အကွာအဝေး / ကျန်းမာရေး)
သောင်းကျန်းမှုအကြောင်း: သဲမုန်တိုင်း Zero Hack
အထူးသဖြင့် Insurgency: Sandstorm ကဲ့သို့သောဂိမ်းနှင့်ပတ်သက်လျှင်အထူးကျွမ်းကျင်သောကစားသမားများသာလျှင် hacks များမသုံးဘဲအမြင့်ဆုံးအုပ်စိုးနိုင်လိမ့်မည်။ တခါတရံတွင်ပျော်စရာကောင်းသောသူငယ်ချင်းများနှင့်အတူသင်သွားရန်လိုအပ်သည်၊ သို့သော်သင်သောင်းကျန်းမှုကိုကြုံတွေ့ရချိန်တွင် - Sandstorm Zero Hack သည်သင်၏ဘေးတွင်ရှိသည်။ ဤအတွင်းပိုင်း cheat သည်အသုံးပြုရလွယ်ကူပြီးသင့်အားသတ်ဖြတ်သည့်စက်အဖြစ်သို့ပြောင်းလဲစေလိမ့်မည်။ ၎င်းကို full-screen mode တွင်ပင်အသုံးပြုနိုင်ပြီး HWID Spoofer မပါရှိသော်လည်းသင်အားကျွန်ုပ်အား GamePron ၌တိုက်ရိုက်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။
အဘယ်ကြောင့် Insurgency ကိုသုံးရသနည်း - Sandstorm Zero Hack သည်အခြားပံ့ပိုးသူများအားအဘယ်ကြောင့်လုပ်သနည်း။
အခြား hacks နှင့် cheat ပေးသူများသည်ဖောက်သည်ကိုမည်သည့်အခါကမျှ ဦး စားပေးမည်မဟုတ်ဟုပြောဆိုကြသော်လည်း၎င်းတို့သည် GamePron ၌ရှိသကဲ့သို့သင့်ကိုသူတို့ဘယ်တော့မှဆက်ဆံမည်မဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏သုံးစွဲသူများ၏လုံခြုံမှုနှင့်ပျော်ရွှင်မှုကိုအခြားအရာများမတိုင်မီထားခြင်းကကျွန်ုပ်တို့အားအွန်လိုင်းမှ hack များအတွက် ဦး ဆောင်ရွေးချယ်မှုအဖြစ်ပြောင်းလဲစေပြီးကျွန်ုပ်တို့၏နည်းလမ်းများကိုပြောင်းလဲရန်အစီအစဉ်မရှိပါ။ ၎င်းသည် Streamproof မဟုတ်သော်လည်း၎င်းသည်ကစားနည်းကိုမျက်နှာပြင်အပြည့်ဖြင့်ဖွင့်ထားသည့်ကစားနည်းနှင့်ကစားနိုင်သည်။ Insurgency: Sandstorm ကစားစဉ်တွင်အမှန်တကယ်အောင်မြင်မှုရရန်သင်လိုအပ်သောအင်္ဂါရပ်များလည်းရှိသည်။
လှည့်စားနေစဉ်မည်ကဲ့သို့ပြုပြင်ပြောင်းလဲရမည်ကိုသင်မကြာခဏစဉ်းစားမိသနည်း။ အခြားကိရိယာများကသင့်ဂိမ်းကိုမဖွင့်မီချိန်ညှိချက်များကိုမညှိထားသော်လည်းသင်၏အခြေခံနိဂုံးသို့ရောက်သွားလေ့ရှိသည်။ GamePron သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိရိယာများအားလုံးအတွက်လက်ရှိစိတ်ချရသော In-game menu ကိုမိတ်ဆက်ပေးသည်။ Insurgency: Sandstorm Zero Hack သည်ကွဲပြားခြားနားသည်။ GamePron တွင်သင်လိုချင်သည့်အတိုင်း hack settings ကို configure လုပ်နိုင်သည်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ In-game menu ကသင်၏ hacking အတွေ့အကြုံကိုလေပြေတစ်ခုကဲ့သို့ဖြစ်စေသည်။ အတိတ်ကာလကအရည်အသွေးနိမ့်သော (h in-game menu မပါ ၀ င်သော) hacks များကိုသုံးရန်ကြိုးစားသူများသည်ကျွန်ုပ်တို့ပြောနေတာကိုအတိအကျသိကြသည်။
A2 ။ ဟင့်အင်း၊
ဒီဂိမ်းထဲမှာပြီးမြောက်ဖို့အများကြီးရှိပါတယ်သကဲ့သို့သင်၏ရန်သူများအနေဖြင့်တိုက်ခိုက်ရန်ရန်ကွဲပြားခြားနားသောထောင့်များစွာ။ ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့၏ Hell Let Loose Intel Hack အတွက်ထုတ်ကုန်သော့ချက်ကိုသင်ဝယ်ယူရန်လိုအပ်သည်ဟုယုံကြည်စိတ်ချမှုရှိပါ။
အဆင်သင့် စိုးမိုး သောင်းကျန်းမှုသုည Hack ကကျွန်တော်တို့ရဲ့သောင်းကျန်းမှုနှင့်အတူ?